Sajhasabal.com |पाँच बुँदे सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडे
पुस २९, काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् ।
शुक्रबार राति सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् । केसीले जुत्ता सिलाइ पेसा गर्ने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन् ।